Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta si ay u shaqaaleysiiso shaqaale qandaraasle | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaShaqaaleynta Shaqaalaha Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta si ay qandaraas ugu siiso shaqaalaha
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta ayaa soo saartay ogeysiis cusub oo shaqaalaysiin. Sida ku xusan ogeysiiska lagu daabacay DPB, Wasaaradda Beeraha iyo Dhirtu waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha 25 laga bilaabo 09 illaa Nofembar iyo 2019 illaa Diseembar 9.
In laga shaqaaleeyo Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, Qeybta Nidaaminta Xogta, oo ku saleysan qodobka Annex 375 ee Sharciga Go'aanka No. 6 isla markaana lagu saleeyay qodobkaan, Qormooyinka Qandaraasyada Söz ee Qeybta Macluumaadka weyn ee Diyaarinta Qeybaha Hay'adaha Dowladda iyo Hay'adaha ayaa lagu daabacay Jariidada Gazette ee taariikhaysan 31.12.2008 iyo lambar 27097. Iyada oo la raacayo Qodobka 8 ee Xeerka Mabaadi'da iyo Nidaamyada Shaqaalaysiinta Shaqaalaha, 9 (sagaal) Qandaraaslaha Shirkadda IT waxaa lagu qori doonaa meelaynta la qabanayo iyada oo la raacayo guusha imtixaanka qoraalka ah ee ay fulinayso Wasaaraddeena.
a) Si loo buuxiyo shuruudaha lagu qeexay Qodobka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee No. 48,
b) Qalin-jabinta afarta sano ee injineernimada kombiyuutarka, injineerinka softiweer, injineerinka korantada, injineerinka elektarooniga ah, injineeriyada korontada ku shaqeeya korontada iyo waaxyada injineerinka warshadaha ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare oo u qalma ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare,
c) (b) aan ka ahayn kuwa lagu cayimay afarta sano ee kulliyadaha tacliinta ee waaxaha injineerinka, kulliyadaha sayniska iyo suugaanta, waxbarashada iyo sayniska waxbarashada, waaxaha tacliinta teknolojiyadda iyo teknolojiyada, tirakoobka, xisaabaadka iyo waaxda fiisigiska, ama u dhigma tacliinta sare ee ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare ee dibedda. (Ardayda qalin jebisa waaxdu waxay dalban karaan dabaqa 2 ee sicirka qandaraaska guud ee billaha)
c) Yeelo ugu yaraan 3 (saddex) sano oo waayo-aragnimo xirfadeed oo ku saabsan softiweeriyada, naqshadaynta softiweerka iyo horumarka iyo habsami u socodka hawshan ama rakibaadda iyo maareynta nidaamyada shabakad ballaaran, ugu yaraan 5 (saddex) sano, iyo kuwa kale ugu yaraan 657 (shan) sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah. Go’aaminta khibradda, sida IT Shaqaalaha, adeegyada hoos yimaada Sharciga No. 4 ama adeegyada qandaraaska lagu saleeyey ee Xeerka Xeerarka 399 oo leh qodobka-hoosaadka (B) ee Qodobka XNUMX ee isla Sharciga iyo muddada adeegga ayaa lagu caddeeyay sida shaqaalaha IT ee qaybta gaarka ah ee ay khusayso Hay'adda Caymiska Bulshada in tixgelin la siinayo).
d) Bixinta aqoonta qalabka kombiyuutarka ee kumbuyuutareedka iyo sameynta maareynta shabakada iyo amniga, dukumintiga in ay ogyihiin ugu yaraan labo ka mid ah luqadaha barnaamijyada hadda,
e) Murashaxiinta labka ah, haddii aysan gaarin da'da howlgalada milatariga firfircoon ama aysan gaarin da'da adeegga militariga, waa inay u adeegeen sidii milateriga oo shaqeynaya ama laga reebay ama dib loo dhigay ama loo wareejiyay fasalada keydka.
FOOMKA CODSIGA IYO TAARIIKHDA
1- tixraacyada; Inta u dhaxaysa 25.11.2019 - 09.12.2019, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu waxaa lagu sameyn doonaa si elektaroonig ah iyadoo loo marayo cinwaanka. Maadaama codsiyada lagu heli doono qaab elektiroonig ah, codsiyada laguma aqbalayo boosta ama shaqsi ahaan.
2- Admissions la samayn doonaa musharixiinta password e-dowladda (www.turkiye.gov.t ah) account waa waajib. Musharixiinta waa inay helaan furaha e-Dowlada si loo isticmaalo akoonkan. Musharixiintu waxay ka heli karaan baqshadda ay ku jirto lambarka sirta ah ee "E-Government password" ee Xarunta Dhexe ee PTT iyagoo shaqsi ahaan u soo bandhigaya kaarka aqoonsiga Lambarka Aqoonsiga Turkiga.
DIIWAANKA LOO BAAHAN YAHAY IN ARJIGA laga codsado;
a) Manhajka Vitae, (CV gaagaaban ee murashaxa ayaa loo diyaarin doonaa sidii hal bog oo waxaa loosoo bandhigi doonaa qaybta 'Macluumaadka Kale' inta lagu gudajiro arjiga la soo mariyay e-dowladda.)
b) Dukumentiga Adeegga SSI, (Diiwaan galinta SSI iyo Dukumiintiyada Adeegga ee Bogagga dukumiintiga boodhka ah, codsiyada elektiroonigga ah inta lagu jiro qaybta 'Macluumaadka kale') waa la gali doonaa.)
c) Dukumintiga muujinaya khibradda xirfadeed ee lagu sheegay Qodobka (3) ee Xaaladaha Guud (Waa lagama maarmaan in la caddeeyo in khibradda xirfadeed loo gudbiyo sidii shaqaalaha macluumaadka, waxaa loosoo gelin doonaa qaybta 'Macluumaadka Kale' inta lagu gudajiro arjiga la soo mariyay e-dowladda.)
d) Dukumintiga sheegaya in isagu / iyadu ay garanayaan ugu yaraan laba luqadood oo barnaamij barnaamij hadda ah oo lagu sheegay (d) ee shuruudaha guud ahaanta (transcript muujinaya ugu yaraan 2 semester programme koorso barnaamij ah oo la qaatay, kaqeybgal / shahaadada imtixaanka, iwm.) (Codsiga ay soo diyaariyeen e-dowladda oo leh hal bog) waxaa loo soo galin doonaa qaybta 'Macluumaadka Kale'.)
e) Shahaadooyinka iyo dukumiintiyada muujinaya khibrada xirfadeed ama khibrada looga baahan yahay boos kasta ee shuruudaha GAARKA ah (Shahaadooyinka iyo liistada dukumiintiyada la cayimay waa in loo diyaariyo sidii dukumenti hal ah oo lagu dhejin doonaa qaybta 'Macluumaadka Kale' inta lagu gudajiro arjiga la soo mariyay e-dowladda.)
Natiijada baaritaanka codsiyada, wadarta boqolkiiba toddobaatan ee dhibcaha KPSS (KPSS dhibcaha murashaxiinta aan soo gudbin dhibcaha KPSS ama 70 waxaa loo qaddariyo inuu yahay 10) iyo soddon boqolkiiba dhibcaha luqadda ajnabiga ah (dhibcaha kuwa aan soo gudbin dhibcaha luqadda ajnabiga waxaa loo qaddarin doonaa sidii eber) Tirada ugu badan ee XNUMX (toban) jeer oo cinwaan kasta waxaa lagu casuumi doonaa imtixaanka qoraalka ah, oo ka bilaabanaya dhibcaha ugu sarreeya marka loo eego darajaynta.
Haddii ay jiraan wax kabadan hal musharrax oo leh isku dhibco ah meeshii ugu dambeysay iyadoo loo eegayo darajadan, dhammaan musharraxiintaan waa la aqbali doonaa imtixaanka.
Liiska musharixiinta u qalma inay galaan imtixaanka qoraalka ah https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ayaa lagu dhejin doonaa goobta. Intaas waxaa sii dheer, ogeysiis qoraal ah ama ogeysiin lama sameyn doono.
Codsadayaasha ayaa dalban kara oo keliya mid ka mid ah jagooyinka lagu dhawaaqay.
Tusaalayaasha tijaabada, goobta iyo taariikhda
Su'aalaha imtixaanku waxay dabooli doonaan dhammaan maadooyinka ku qeexan shuruudaha farsamada iyo kuwa gaarka ah ee jagada ay ku dabaqaan. 10 (toban) su'aalood ayaa lagu wadaagi doonaa jagooyinka lagu dhawaaqay. Su'aalaha caadiga ahi waxay dabooli doonaan mowduucyada IT-ga ee hadda socda.
Waqtiga iyo goobta imtixaanka iyo liiska murashaxiinta u qalma inay galaan imtixaanka qoraalka ah https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ayaa lagu dhejin doonaa goobta.
Kuwa aan u qalmin inay galaan imtixaanka qoraalka ah waxay rafcaan ka qaadan karaan Wasaaradda Beeraha iyo Waaxda Duurjoogta ee Xogta Habaynta seddex maalmood gudahood (X) maalmaha shaqada, oo ay kujirto taariikhda la daabacay, ka dib liiska kuwa xaq u leh qaadashada imtixaanka qoraalka ah la daabaco. Diidmo kasta oo aan la xareynin waqtiga kama dambeysta ah lama aqbali doono. Diidmada waxaa dhameystiri doona guddiga imtixaanka gudaha 3 (saddex) maalmood shaqo gudahood. Natiijooyinka waxaa lagu ogeysiin doonaa dadka ay quseyso qoraal ahaan.
DIB U EEGIDDA
Musharaxiinta kuwaas oo dhaliya 100 iyo in kabadan oo ah 70 dhibco buuxa dhamaadka imtixaanka qoraalka https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (sagaal) sharaf, 9 (sagaal) musharixiin badal ayaa la shaacin doonaa inuu yahay guuleyste.
Diidmada natiijada natiijooyinka Imtixaannada qoran waxaa loo gudbin doonaa waaxda IT gudaheeda 3 (saddex) maalmood shaqo gudahood laga bilaabo taariikhda natiijada lagu dhawaaqay waxaana qiimeyn doona guddiga imtixaanka iyo hay'adda jaamacadda ama hay'adda la xiriirta.
Haddii dhibcuhu u siman yihiin imtixaanka qoraalka ah; Haddii muddada khibradda xirfadeeddu dheeraato oo muddada khibrada xirfadeed la siman tahay, taariikhda dhowaan qalin-jabinta jaamacadda waa la baari doonaa.
Natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB goobaha. Intaas waxaa sii dheer, ogeysiis qoraal ah ama ogeysiin lama sameyn doono.
Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta